Izay rehetra momba ny Dentastix ho an'ny alika, manampy amin'ny fikolokoloana ny nifiny ve izany? Hevitra | Tontolo alika
Susana godoy | | Fahano alika sy alika kely
Mikarakara ny fahasalaman'ny biby fiompinay foana izahay ary noho izany, manandrana manome azy ireo ny sakafo, fahadiovana ary izay rehetra eo am-pelatananay. Fa indraindray ny lohahevitry ny fahadiovana am-bava, izay raha ilaina ho antsika dia vao mainka ho an'ireo zanatsika volom-borona. Noho izany, mahita vokatra toy ny Dentastix izahay.
Iray amin'ireo loharanon-karena lehibe omena ireo tarehimarika izay efa dinihina aretina siligaoma. Maherin'ny 80% ny biby no manana azy ireo. Inona no vokatry ny tsy fisorohana na fitsaboana azy ireo? Mety harary ianao, miaraka aminy ny fanaintainana ary very ny nifinao aza. Satria tsy tiantsika hitranga izany dia hamaha azy isika!
1 Inona ny Dentastix
2 Ahoana ny fomba hisafidianana ny Dentastix mety ho an'ny alikanao
3 Ahoana ny fomba fiasan'ny Dentastix, manadio ny nifinao tokoa izy io?
4 Azo omena alika kely ve ny Dentastix?
5 Ratsy ve ny manome ny alika Dentastix anao?
6 Ny fandraisako an'i Dentastix ho an'ny alika
7 Aiza no hividianana Dentastix mora kokoa
Inona ny Dentastix
Satria sarotra be ny miborosy nify alika, dia mila mitady fomba hafa azo atao toa izany isika. Avy eo dia nilalao izany Dentastix, satria tsakitsaky azon'izy ireo tsakoina, noho izany dingana tsotra izany dia efa hikarakara ny nifinao sy ny hihy ianao.
Satria manana endrika 'X' izay tsy tongatonga ho azy, fa satria amin'ity fomba ity, ny vokatra dia afaka mandehandeha ny faritra rehetra amin'ny nify ary miaraka aminy, manadio tsara kokoa raha ny biby kosa miala voly amin'ny alàlan'ny filalaovana sy ny fikikisana. Ho fanampin'izay, tsy azontsika hadinoina fa ambany tavy izy ary 77 kaloria fotsiny no ao aminy. Manao veloma ny fivontosan'ny tartar sy ny siligaoma!
Ahoana ny fomba hisafidianana ny Dentastix mety ho an'ny alikanao
Kitapo misy ny ...
Pedigree - Bars ...
Ny fisafidianana ny Dentastix mety indrindra ho an'ny alikanao dia tena tsotra. Satria vokatra azo avy ao anaty fonosana. Ankoatry ny fahafahantsika misafidy ny habetsany dia hanao toy izany koa isika araka ny amboa ananantsika. Amin'ny lafiny iray, misy fonosana Dentastix mini manokana ho an'ny alika izay manokana ihany koa. Noho izany, samy mila alika kely na alika kely na alika kely.
Fa raha manana alika antonony ianao dia afaka misafidy vokatra kely na salantsalany, izay voatondro ao anaty boaty tsirairay. Toy ny hoe manana alika lehibe ianao, dia hisy bara lehibe kokoa ho an'ny nifiny. Ka raha fintinina ny safidy dia miankina amin'ny haben'ny biby fiompintsika. Satria ny vokatra dia hisy vokany mitovy ary manana tanjona mitovy amin'ny taona rehetra. Satria hanome azy iray isan'andro ianao dia afaka misafidy fonosana misy singa maromaro kokoa mba tsy ho lany ao aminy.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Dentastix, manadio ny nifinao tokoa izy io?
Ny marina dia eny. Dentastix dia natao hanadiovana ny nifin'ny biby ary hataony amin'ny taratasy. Misaotra ny endrika 'X', izay efa noresahintsika, misy hetsika mekanika amin'ny nify. Midika amin'ny fitsakoana misimisy kokoa, mamoaka rora bebe kokoa, ary manadio vava.. Fa io koa dia manakana ny fiforonan'ny tartar, manao fanatanjahan-tena miaraka amin'izay koa ny siligaoma ary manafaka azy ireo bakteria izay mazàna mitoetra ao aminy. Izy io dia manana ny asany amin'ny fanalefahana ny takelaka misy, ny fisorohana ny fananganana vato bebe kokoa. Inona no mahatonga azy io hivoaka mora kokoa. Zava-dehibe tokoa ny fanomezana bà ny biby fiompintsika isan'andro, satria amin'izay isika vao afaka mikarakara ny vavany ary mendrika izany.
Na dia manahy aza ianao sao hohanin'ny alikao haingana noho ny fahombiazany dia afaka miala sasatra ianao. Satria voalaza fa raha segondra vitsy monja ny fanesorana azy dia arakaraka ny ahitsakitsahinao ny fakana azy. Misy ny tsiambaratelo, ao amin'ireo manaikitra ireo dia haingana na haingana kokoa izy ireo. Ka na dia amin'ny hafainganam-pandehan'izany aza dia hanadio ny nifinao amin'ny làlana tsara.
Azo omena alika kely ve ny Dentastix?
Puppies tsy mbola manana olana nify, toy ny fitsipika. Mahalana tokoa ny fofona ratsy na tartar no mitranga eo am-piandohana. Fa marina fa afaka mampiditra tsikelikely fahazarana tsara amin'ny sakafon'izy ireo sy amin'ny fahazaran-dry zareo hisorohana ny olana any aoriana isika. Izany dia noho izany Manomboka amin'ny enim-bolana dia tsara ny manome an-jaza Dentastix fa tsy alohan'izay. Raha ny marina dia tolo-kevitra ny kilalao mitsako sasany izay somary mafy kely tsy tokony homena raha tsy mihoatra ny 10 volana. Saingy raha sanatria ity sakafo maivana ity dia vitantsika soa aman-tsara izany.
Mazava ho azy, mividy ny kinova 'Puppy' izay natao ho an'ny alika kely ao an-trano. Ho azy ireo dia ho fahafinaretana sy fiadanan-tsaina ho anao izy ireo satria voaisy kalsioma, izay hanampy azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, azonao omena an'ireo zanak'alikao ity vokatra ity hahazoana antoka fa hanomboka ho salama ny vavany rehefa mitombo!
Ratsy ve ny manome ny alika Dentastix anao?
Tsia, tsy ratsy ny manome ny alika Dentastix anao. NAHOANA Na dia karazana vatomamy ho azy ireo aza izy io dia tsy nanampy siramamy. Ankoatr'izay, araka ny efa noresahintsika teo aloha, vitsy ny kaloria ao ary tian'izy ireo ny tsirony. Ka, tombony ampy ho azy ireo ny miloka amin'ny vokatra toy izao. Tsy lazaina intsony ny fanampiana atolotry ny fikarakarana ny siligaoma, manao veloma ny fofona ratsy ary hisorohana ny aretina amin'ny ho avy na aretina sarotra kokoa izay mety hitranga amin'ny alàlan'ny bakteria mihangona ao am-bava.
Ny fandraisako an'i Dentastix ho an'ny alika
Marina fa indraindray isika dia azo iharan'ny herisetra maromaro momba ny vokatra toy izany. Fa rehefa manao fikarohana kely ianao dia tsapanay fa tena tsara ny hevitr'izy ireo. Indray andro dia naka ny fandrobana aho ary nividy azy ireo ho an'ny alikako. Tsy isalasalana fa ny fihetsiny dia nazoto kokoa noho ny nandrasana ary toa ny fandreseny no nandresy azy tamin'ny fifanakalozana voalohany. Miandry ny fanomezana foana izy isan'andro ary toy izany foana mandritra ny herinandro. Tokony holazaina fa ny nifiny dia mamiratra noho ny teo aloha, hatreto dia mbola tsy nanana olana fofonaina ratsy izy izay hitany nisintona matetika ary na tartar. Zavatra izay manahirana indraindray satria efa fantatsika fa napetrak'izy ireo tao am-bavany ny zava-drehetra. Noho izany, azoko lazaina amin'ny olona voalohany fa ny vokatra dia manatanteraka ny asany. Fanao isan'andro sy any an-trano ianao tsy afaka manadino azy, raha tsy izany, azo antoka fa tsy hahita azy io ny voloko!
Aiza no hividianana Dentastix mora kokoa
Amazon: Raha te hividy Dentastix mora kokoa ianao, dia Amazon dia iray amin'ireo tranonkala ankafizin'ny tsirairay. Afaka mahita fonosana manokana ianao isaky ny vanim-potoana ary koa amin'ny isan-karazany, arakaraka ny filan'ny biby fiompinao. Ianao koa dia hankafy ny fividianana haingana sy ny fihenam-bidy, izay tsy mankarary velively.
zooplus: Iray amin'ireo fivarotana biby fiompy aleon'ny mpampiasa maro izy io. Satria koa ny fandefasana dia haingana dia haingana ary fanentanana hatrany izany. Raha ny Dentastix dia ho hitanao amin'ny endrika sy marika samihafa ihany koa izany. Fa tsy ho an'ny alika ihany fa ny saka dia ho afaka mankafy ny tombony lehibe ihany koa.
kiwiko: Io ilay rojo vy mpitarika amin'ny vokatra biby. Ka ho hitantsika koa ny karazana vokatra sy ny hevitra rehetra entina hanatsarana ny fahasalaman'ny biby fiompinay. Noho izany, Dentastix dia tsy afaka nanjavona tao amin'ny katalaoginy. Amin'ny vidin'ny fifaninanana izay tokony ho hitanao ihany koa mba tsy hanan-janak'alika ny alikanao.
Matetika: Ny iray amin'ireo teboka fototra izay manana izay ilainao amin'ny biby dia ity toerana ity. Satria efa 10 taona mahery izy ireo no manome ny karazan-vokatra rehetra ary amin'ity tranga ity dia azonao atao koa ny mahazo ny fonosanao Dentastix. MANDRAKIZAY mifantina ilay voalaza ho an'ny haben'ny biby fiompinao ary ho hitanao izay rehetra azonao tehirizina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » dentastix